ओमकार टाइम्स डाइनोसरको १४ सय लाख वर्ष पूरानो तिघ्राको हड्डी फेला ! – OMKARTIMES
डाइनोसरको १४ सय लाख वर्ष पूरानो तिघ्राको हड्डी फेला !
एजेन्सी । दक्षिण-पश्चिमी फ्रान्सस्थित एउटा उत्खनन क्षेत्रमा डाइनोसरको तिघ्राको हड्डी फेला परेको छ । वैज्ञानिकहरूले करिब दुई मिटर लामोलामो भीमकाय डाइनोसरको १४ सय लाख वर्ष पूरानो तिघ्राको हड्डी फेला पारेको बताएका हुन् ।
४० देखि ५० टनसम्मको तौल भएका सोरापाड डाइनोसरहरू १४ करोड वर्ष पहिला अस्तित्वमा रहेको र सन् २०१० यता सो क्षेत्रबाट ती डाइनोसरका साढे सात हजारभन्दा बढी जीवाशेष फेला पारिसकिएको अन्तराष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । एउटा फ्रान्सेली पत्रिका अनुसार सन् २०१० मा एउटा सोरापाड डाइनोसरको तिघ्राको हड्डी फेला पारिएको थियो जसको लम्बाइ २ मिटर र तौल ५०० किलोग्राम थियो।
यसअघि स्टेगासोरस डाइनोसरका हड्डी तथा अस्ट्रिच डाइनोसरको एउटा सिङ्ग फेला पारिएको थियो।